About Us - Kingswel Makiinado Co., Ltd
Waxaan ku adkaysanayaan on aaminsan, xoogga oo dhan in la sameeyo design ugu horeysay ee fasalka la noocyo kala duwan ah oo tayo leh loo ballan qaaday, oo si fiican u muujiyaan xidhiidhka ka dhexeeya alaabta iyo dadka, iyo waafajinta wakhtiga.
Waxa aynu xoogga saaraynaa ma aha oo kaliya daqiiqadii of design ah makaanik ama qayb ka mid ah shaqada, laakiin sidoo kale waxaan isku dayi ugu fiican si aan cilmi ahaan isu geeyo ruuxa shirkadda maanta iyo berri.
wax soo saarka kasta oo lagu qiyaasay by naqshadeeye ee caado deegaanka ee la isticmaalayo iyo dhaqankan. Waxaan leenahay cilmi khibrad iyo waaxda waxbarashada iyo shabag adeegga iibinta ee wadanka oo dhan, sidoo kale qalabka sare iyo shaqaalaha; in aan waqti kasta qabsan karaa fursad iyo si dhakhso ah u bixiyaan adeegga ugu fiican ee aad u.
Muuqashada ka baxsan warshad